07/07/13 ~ Myanmar Forward
တရုတ်တွင် ကလေးမွေးဖွားပေးခဲ့ရသော လူကုန်ကူးခံရသူ အမျိုးသမီး ပြန်ရောက်ရှိချိန်တွင် အမှုဖွင့်
Posted by drmyochit Sunday, July 07, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကလေးမွေးဖွား ပေးခဲ့ရသော လူကုန်ကူးခံရသူ အသက် ၂၂နှစ် အရွယ်အမျိုးသမီးသည် ရန်ကုန် သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိချိန်တွင် ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ကိုယ်တိုင် လာရောက် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ် (၇) ရပ်ကွက်နေ မအိပြည့်ဖြိုး ၂၂ နှစ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလက တရုတ် နိုင်ငံ သို့ လူကုန်ကူး ရောင်းချ ခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန် လည်ရောက် ရှိခဲ့ကာ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) ရဲစခန်းတွင် လူကုန်ကူးသူ မဇာနည်ထွန်း၊ ကိုညီနှင့် ကိုသူတို့ ကို အရေးယူပေးရန် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း မအိပြည့်ဖြိုးက The Vocie သို့ ပြောကြားသည်။
မအိပြည့်ဖြိုးသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ၌ တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ သူငယ်ချင်း မဇာနည်ထွန်းက မန္တလေးတွင် ကျောက်သွေး အလုပ်ဖြင့်တစ်လ ကျပ်၆သိန်းရမည် ပြောသဖြင့် လိုက်ပါသွားခဲ့ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး မဇာနည်ထွန်းနှင့် သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည့် ကိုညီနှင့် ထိုသူတို့ သုံးဦးသည် မိမိကိုတရုတ်လင်မယား ထံရောင်းချခဲ့ကာ ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ လင်မယားက တရုတ် အမျိုးသား မာခဒက်ထံသို့ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၅၅,၀၀၀ နှင့် ထပ်မံ ရောင်းချခံခဲ့ရကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
မိမိသည် တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့် အဓမ္မ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ရပြီး ၂နှစ်နှင့် သုံးလကြာ နေထိုင်စဉ်အတွင်း သားယောက်ျားလေး တစ်ဦး မွေးဖွားပြီးနောက် ခွင့်တောင်း ပြန်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အမျိုး သမီးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“သမီးကိုတွေ့တော့ ရင်ထဲ ဆို့နင့်သွားတယ်။ မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ကို ထင်ထားတာ။ သမီးနှစ်ယောက် ရှိတာ သူကအငယ်” ဟု မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ချိုချိုမြင့်က ပြောဆိုသည်။
လူကုန်ကူးသူ မဇာနည်ထွန်းကို ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီတွင် နေအိမ်တွင် အိပ်နေစဉ် ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း သိရှိရသည်ဟု ၎င်းကပြောဆိုသည်။ အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ ပိုင်း) မြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အမှုစစ် ရဲအရာရှိက မိမိတွင် ဖြေဆိုခွင့် မရှိကြောင်း ဖြေကြား ပြီး စခန်းမှူးထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဖုန်းကိုင်ခြင်း မရှိပေ။
မဇာနည်ထွန်း၊ ကိုညီနှင့် ကိုသူတို့ကို လိင်လူကုန်ကူးမှုဖြင့် အရေးယူပေးရန် မအိပြည့်ဖြိုး၏ တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်း မှုကို ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် (ပ) ၃၂၇/၁၃၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ-၂၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ယင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Sunday, July 07, 2013, under သတင်းများ | No comments
မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံး ၃လုံးကို ကာမပ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဥာဏ်တော် အမြင့်ပေ ၈ဝရှိသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်အနီး နောက်ထပ် ၂လုံးကိုမူ မပေါက်ခွဲခင် ဖယ်ရှားရှင်း လင်းနိုင် ခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။ ပေါက်ကွဲမှုမှာ နံနက် ၅နာရီခွဲနှင့် ၆နာရီအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ခရီးသွား တိုးရစ် ၂ဦး၊ မြန်မာတစ်ဦးနှင့် တိဘက်တစ်ဦးတို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားရသည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်နယ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အာနေးလ် ဂေါ့စ်ဝါမီက ဗုဒ္ဓဂါယာပေါက်ကွဲမှုသည် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မှုဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအပေါ် အခြေခံသည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်မှုများပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ခံရနိုင် သည် ဆိုသည့် ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများ ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြည်နယ်လုံခြုံရေးများ စောင့်ကြည့်နေ ဆဲမှာပင် ဗုံးခွဲမှုပေါ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲချုပ်က ဆိုသည်။
ဗုံးခွဲမှုကြောင့် မဟာဗောဓိစေတီတော်လည်း ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ ပရိဘောဂများသာ ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းနှင့် ဗုဒ္ဓမြတ် စွာ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ရရှိခဲ့ရာ မဟာဗောဓိညောင်ပင်လည်း ထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်အရာရှိများကဆိုသည်။
ဇွန်လ(၇)ရက် နံနက်တွင် အန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ဗုဒ္ဓဂယာဝင်းအတွင်းရှိ မဟာဗောဓိစေတီ အနီးတွင် ယနေ့ နံနက်က (အန္ဒိယစံတော်ချိန် ၅ နာရီ ၁၅မိနစ်ခန့်) ဗုံး ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှု များဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာ သာဘုန်းတော်ကြီး ၂ ပါး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ကြောင်းသိရသည်။
"ဒီမနက်အစောပိုင်းမှာ ပေါက်ကွဲအားနည်းတဲ့ ဗုံး ၈ လုံးဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ၂ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်" ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးတန်းအရာရှိ S.K. Bharadwaj ကပြောသည်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သက်တော် ၅၀ အရွယ် တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးနှင့် သက်တော် ၃၀ အရွယ် မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ဟု ယင်းကပြောသည်။
ထို့အပြင် ဗုဒ္ဓဂယာဝင်းအတွင်း အခြားဗုံး ၂ လုံးကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်လုံးမှာ ညဏ်တော် အမြင့် ပေ ၈၀ ခန်ရှိသော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်အနီးတွင် ထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု S.K. Bharadwaj က ဆိုသည်။
အန္ဒိယနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် မန်မို ဟန်ဆင်းကလည်း ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်ဒေ သဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဂယာဝင်းအတွင်း ဗုံးခွဲလုပ်ကြံမှုကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီး "ဘာသာရေး အမွေ အနှစ်နေရာ များကို တိုက်ခိုက်လာခြင်းအား လုံးဝ သည်းခံနေမည်မဟုတ်" ဟု သတိပေးလိုက်ကြောင်း ဒေသ တွင်း သတင်းစာ the Press Trust of India က ရေးသားဖြော်ပြထားသည်။
အန္ဒိယနိုင်ငံပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အကြီးတန်း အရာရှိ Anil Goswami က ယင်းလုပ်ရပ်အား အကြမ်းဖက်မှု တစ်ရပ်ဟု ဆိုသော်လည်း အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲမှုသည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ လက်ချက် ဆိုသည်ကို မသိရသေးကြောင်း ဆိုသည်။ဗဟိုအစိုးရက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့စေလွတ်ထားသည်ဟုလည်း ယင်းကပြောသည်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဂယာဝင်းအတွင်း လုံခြုံရေး အင်အားတိုးမြင့်ချထားပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ သည့် ဘုန်းတော်ကြီး ၂ ပါးအား ဆေးရုံသို့ ပိုဆောင်ကာ ဆေးကုသမှု ခံယူစေခဲ့ကြောင်း ဒေသခံရဲအရာရှိ Bharadwaj က ပြောသည်။
Posted by drmyochit Sunday, July 07, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ခရီးသည် ၃၀၀ ကျော် တင်ဆောင်လာတဲ့ Asiana လေကြောင်းလိုင်း က လေယာဉ်တစီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနောက်ဘက်ခြမ်း ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်ဆစ္စကို နိုင်ငံ တကာလေ ဆိပ်ကို အဆင်းမှာ ပျက်ကျခဲ့လို့ လူ နှစ်ဦး အနည်းဆုံး သေဆုံးသွားရပါတယ်။ ဆန်ဖရန်ဆစ္စကို မီးသတ် ဌာန အကြီး အကဲ Joanne Hayes-White က လူ ၁၃၀ ဒဏ်ရာရရှိပြီး တချို့က စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာ ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လေယာဉ်ခရီးစဉ်အမှတ် ၂၁၄ ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းကနေ ထွက်လာတာဖြစ်ပြီး၊ တောင် ကိုရီးယားနိုင် ငံ ဆိုးလ်မြို့ မှာ ခရီးတထောက် ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းတွေမှာတော့ ဘိုးရင်း ၇၇၇ လေယာဉ် ဟာ မြေပြင်ပေါ်မှာ အမြီးပြုတ်ကျနေပြီး၊ တောင်ပံတဘက် လည်း ပြုတ်ထွက်နေတာ တွေ့ရပါ တယ်။ လေယာဉ် ကိုယ်ထည်အပေါ်ပိုင်း တခုလုံး မီးလောင်ကျွမ်းထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လေ ယာဉ် အမြီး က ပြုတ်ကျတဲ့ အပိုင်းအစတွေက လည်း လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ် မှာ ပြန့်ကျဲနေ တာတွေ့ ရပါတယ်။
လေယာဉ်ဟာ ပြေးလမ်းကို ထူးဆန်းတဲ့ ထောင့်ချိုးပုံစံနဲ့ ဆင်းလာပြီး၊ မြေပြင်နဲ့အထိမှာ လှုပ်ခါပြီး လေယာဉ် အမြီးပိုင်း ပြုတ်ထွက် သွားတာတွေ့ရတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောကြပါတယ်။ ဒီလေယာဉ် ပျက်ကျ မှုဟာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ FBI က တွေ့ ရကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်စီး လာသည့် အမျိုးသားမှ ရပ်ထားသည့် ယာဉ်အား တိုက်မိ သေဆုံးခြင်း
Posted by drmyochit Sunday, July 07, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
၆.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၃၀၀ အချိန် ဒဂုံတောင်မြို့နယ်၊ (၆၆)ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းနှင့် ပဲခူးမြစ်လမ်းဆုံအနီးတွင် ဧရာဝဏ်လမ်းအတိုင်း ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်မှ သာကေတမြို့နယ်ဘက်သို့ ဆိုင်ကယ်အမှတ် ၂၇ယ/------၊ လင်ဖန်း 110 တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ဖြူနီကြားအရောင် ဆိုင်ကယ်အား မောင်းနှင်လာသည့် အမည်မသိ ဗမာအမျိုးသား၊ အသက်၄၀နှစ်ခန့်၊ အရပ် ၅ပေ၅လက်မခန့် ၊ အသားဖြူ၊ ခန္ဓာကိုယ် ပိန်/ပါး၊ ၀ဲလက်မောင်းနှင့် လက်ဖျံတို့တွင် ဆေးမင်ကြောင်များပါရှိ၊ နေရပ်လိပ်စာ(စုံစမ်းဆဲ)သည် ရပ်ထားသည့် နောက်တွဲပါ ၁၂ဘီးယာဉ်၏ နောက်ဘက်အား ၀င်တိုက်မိ၍ ဦးခေါင်းထိပ်နှင့် နောက်စေ့ တို့တွင် ပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာများ ရရှိကာ အခင်းဖြစ်နေရာ၌ သေဆုံးသွားခဲ့သဖြင့် ဒဂုံတောင်မြို့မရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၂၀/၂၀၁၃၊ပုဒ်မ၃၀၄-ကဖြင့် အမှုဖွင့် စုံစမ်းခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသည့် အမျိုးသား၏ အမည်နှင့် နေရပ်တို့အား ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့စု(၃၈)မှ စုံးစမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၎င်းမှာ ကိုသန်းနိုင်ဦး(ခ) အငယ်လေး၊ ၃၅ နှစ်၊(ဘ)ဦးမောင်မောင်တင်၊
(၁၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေသူဖြစ်သည်ကို စုံစမ်းသိရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ (Yangon Police) Facebook အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ သတင်းထုတ်ပြန် ထားပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဘီဟာပြည်နယ်မှ ဗုဒ္ဓဂါယာရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဝင်း တစ်ခုအတွင်း ဇူလိုင် ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် သံဃာနှစ်ပါး အပါအ၀င် ငါးဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပေါက်ကွဲသည့် ဗုံးများသည် အားမပြင်းသောကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ဗောဓိညောင်ပင်တို့ ပျက်စီးခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း အိန္ဒိယရဲများက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပေါက်ကွဲမှု ရှစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သူများတွင် သံဃာတော်နှစ်ပါး ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေများနှင့် ရဲအရာရှိများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရသူများအနက် တစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း သိရသည်။
ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားသည့် အချိန်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဖူး ၂၀၀ ခန့် ရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လုံခြုံရေးများကို တိုးမြှင့်ချထားကြောင်း ခရိုင်ရဲ အရာရှိက ပြောကြားခဲ့ပြီး NDTV ရုပ်သံဌာနကလည်း မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံးတစ်လုံးကို ထပ်မံရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့သည့် ဗောဓိညောင်ပင်၊ မဟာဗောဓိ ရုပ်ပွားတော်နှင့် မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးခဲ့သော ကျောင်းတော်နေရာများ ရှိသည်။
ကနေဒါမှာ ရေနံတင် ရထား မီးလောင် ပေါက်ကွဲ
ကနေဒါနိုင်ငံ Quebec ပြည်နယ်က လက်ခ် မက်ဂန်းတစ် မြို့လေးမှာ ရေနံတင် ရထား ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်လို့ ကြီးကြီးများများ မီးလောင်မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်တဲ့ နေရာဟာ အမေရိကန် နယ်စပ် အနီးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး နာရီ အတော်ကြာထိ မီးငြိမ်း သတ်မှုတွေ ဆက်လုပ် နေရပါတယ်။
မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး အများ အပြားလည်း ပျောက်ဆုံး နေပါတယ်။
ပေါက်ကွဲတဲ့ ရထား အနီးအနားက အိမ်တွေလည်း မီးလောင် ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။
ရထား ကုမ္ပဏီ ပြောခွင့် ရသူကတော့ အခု ရထားဟာ တွဲထိန်း ဝန်ထမ်းတွေ အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့ ရပ်နား ထားစဉ်မှာ ရထားက အနိမ့်ပိုင်း ဆီကို လိမ့်ဆင်း သွားခဲ့ပြီး ဘာကြောင့်ဆိုတာ အသေးစိတ် မသိရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ ဂါယာ မဟာ ဗောဓိမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂါယာက မဟာဗောဓိ စေတီနဲ့ အနီး တဝိုက်မှာ တနင်္ဂနွေ မနက် ၆ နာရီ နီးပါးက ဗုံး ပေါက်ကွဲမှု ဆက်တိုက် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အဲဒီမှာရှိတဲ့ မဇ္ဈီမ သုခ ဖောင်ဒေးရှင်း ကျောင်းတိုက်က ဆရာတော် ဦးနန္ဒဝံသက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အထင်ကရ စေတီတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ မဟာ ဗောဓိကိုတော့ ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်းနဲ့လ အသေ အပျောက် ရှိတယ်လို့ သတင်း မရကြောင်း ဆရာတော်က ဘီဘီစီကို မိန့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ တချို့ ထဲမှာတော့ မြန်မာ သံဃာတော် ဦးရာသဂ္ဂ ပါဝင်ကြောင်း ဆရာတော်က ပြောပါတယ်။
ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ၊ ဘယ်လို ဗုံးပေါက်ကွဲမှုလဲ စတဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဂုံးရှိန်ကျေးရွာ အနီးတွင် တည်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုတွင် နေ့စား အလုပ်သမား တစ်ဦး ကို နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား တစ်ဦးက နှစ်ကြိမ်တိုင် အဓမ္မ ပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သည်ကို ရဲသို့ သွားရောက် တိုင်ကြားသော်လည်း ရဲက အရေးမယူရဲဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယ PunjLloyd ကုမ္ပဏီမှ Mr Ali Kumar သည် နေ့စား ၀န်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ် သူ ကျောက်ဖြူမြို့ နယ် ဂုံးရှိန်ကျေး၇ွာအုပ်စု စေပုတ်ကေ ကျေးရွာမှ အသက် ၁၇ အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်ကြိုးစားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ ကြိုးစားတာက ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရှိနဲ့ ဘေးလူတွေ မြင်သွားတော့ အကြံအစည် မဖြစ်မြောက်လိုက်ဘူး။ ဒေသခံတွေက ရဲကို တိုင်ကြားတဲ့ အတွက် အဲဒီ အာလီ ကူမာကို ရဲစခန်းက ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ MOGE ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူတွေ လာ ပြီး အာမခံနဲ့ ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်” ဟု လူမူရေး လုပ်နေသူ လူငယ် တစ်ဦးက ပြောသည်။
MOGE မှာ Myanmar Oil and Gas Enterprise ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်ရောက်ပြီး ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် အာလီကူမာက နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် အမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည် ကြိုးစားခဲ့သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“ ဒေသခံ ဂုံးရှိန် ရွာသူ ရွာသားတွေသားတွေနဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့ ပေါ်က ပြည်သူတွေက ဒီဖြစ်ရပ်ပေါ် မှာ ကျောက်ဖြူရဲသို့ သွားရောက် တိုင်ကြားတယ်။ သူတို့က ပိုက်ဆံ ရထားတယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာမှ အရေး မယူဘူး။ ဒေသခံတွေကတော့ ဒေါသထွက်လျှက် ရှိနေကြပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
အမူမှာ တရားရုံးသို့ယခု အချိန်ထိ မရောက်ရှိသေးဘဲ ကျောက်ဖြူမြို့ ရဲစခန်းတွင်သာ ရှိနေသေးကြောင်း တရားရုံးနှင့် နီးစပ်သူ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ နိုင်ငံခြားသား အမူဆိုတော့ ရဲက တရားရုံးကို မပို့ဘဲ ထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိရ သလောက် အမူက တရားရုံးကို မရောက်သေးဘူး။ ဒီအပေါ်မှာ ဒေသခံတွေက မကျေ မနပ် ဖြစ်နေကြတာပါ” ဟု ဆိုသည်။
ကျောက်ဖြူရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်ရာ ဒီအမှုအကြောင်း မသိရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယခင်ကလည်း ဂုံးရှိန် ကျေးရွာတွင် ယခုကဲ့သို့ အလားတူ အဖြစ်အပျက်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ကုမ္ပဏီမှ အမူကို ငွေပေးကာ ကျေအေးမူများ ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေသခံ ပြည်သူများကမူ မြေသိမ်း၊ မတော်မတရားလုပ်မူ အပါအ၀င် အနိုင်ကျင့် စော်ကားမူများကြောင့် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများ အပေါ် အထူးမကျေမနပ် ဖြစ်နေကြဟု ဆိုသည်။ ဘင်္ဂလာ ပင်လယ်အော်၏ ကောင်းမွေကို အစိုးရနှင့် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများက မြိန်ရှက်စွာ အကျိုးခံစားနေကြရသော်လည်း ဒေသခံများမှာမူ ကောင်းမွေကို တစ်စုံတစ်ရာ ခံစားခွင့်မရဘဲ ဆိုးမွေများကိုသာ ခံစားနေကြရသဖြင့် ရခိုင်မှ စီမံကိန်းများ အပေါ် အထူး စိတ်ပျက် နေကြသည်ဟု သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော ကျော်လင်းသည် အရှည် ၁၈ လက်မခန့်ရှိဓားကို ကိုင်ဆောင်ကာ အခြားလူငယ် ခုနစ်ဦးတို့သည် ည ၁၀ နာရီကျော်တွင် ဆိုင်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာပြီး စားပွဲဝိုင်းတစ်ခု၌ အရက်နှင့် ရေသန့်မှာယူကာ စားသောက်နေကြောင်း၊ ယင်းနောက် ကျော်လင်းနှင့် အတူပါလာသူ ခုနစ်ဦးတို့သည် အခြားစားသောက်ဝိုင်းရှိ စားသုံးသူများထံသို့ ကူးသွားပြီး အရက်ဖိုး တောင်းခံခဲ့ပြီး "မပေးလျှင် ဓားကိုကြည့်" ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအခါ ဆိုင်အတွင်း စားသုံးသူ အချို့မှာ ကြောက်လန့်ပြီး ငွေကြေးပေးခြင်း၊ အချို့မှာ ယင်းစားသောက်ဆိုင်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော်တို့က ဆိုင်သိမ်းပြီး အိမ်မှာအိပ်နေတာပါ။ ဆူညံသံတွေကြားလို့ အပြင်ကို ထွက်ကြည်တော့ ဓားတွေကိုင်နေတဲ့ လူအုပ်စုကို စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်အထင် လူကခုနစ်ဦး မကဘူး။ ၁၃ ဦးလောက် ရှိမယ်လို့ ထင်တယ်။ သူတို့တွေက တစ်ဝိုင်းပြီးတစ်ဝိုင်း ခုံပေါ်ကို ဓားထောက်ပြိး ပိုက်ဆံတောင်းတယ်။ ထိုင်နေတဲ့ လူတွေကလည်း ဓားတွေနဲ့ဆိုတော့ ကြောက်ပြီး ပါတဲ့ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ထုတ်ပေးကြတယ်။ ကျော်လင်းကိုင်တဲ့ဓားက တော်တော်ရှည်တယ်" ဟု အဆိုပါ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ပြီး ဖြစ်စဉ်ကို မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူ အသက် ၃၀ ကျော်ခန့် အမျိုးသား တစ်ဦးက ဆိုသည်။
မင်္ဂလာမြို့မ ရဲစခန်းမှ အမှုစစ်ဖြစ်သူ ဒုရဲအုပ်ညွန့်ဝင်းက "ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ကျော်လင်းပါ ခုနစ်ဦးတို့က တခြားဝိုင်းတွေဆီမှာ ငွေတောင်းနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆိုင်မန်နေဂျာက ရဲစခန်းကို ဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဆိုင်ကိုချက်ချင်း ရောက်လာပြီး ခုနစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်။ ကျော်လင်းဆိုသူက ထွက်ပြေးသွားတယ်။ နောက်ပြီး ဓားတစ်လက်ကိုလည်း ဆိုင်ထဲမှာတွေ့ရှိလို့ သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်။ လွတ်မြောက်နေတဲ့ ကျော်လင်းကိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပြီး အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိအောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်" ဟု ပြောပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်အား မင်္ဂလာဒုံမြို့မ ရဲစခန်းမှ (ပ) ၄၀၃/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ- ၃၈၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်တွင် ကလေးမွေးဖွားပေးခဲ့ရသော လူကုန်ကူးခံရသူ အမ...
ဆိုင်ကယ်စီး လာသည့် အမျိုးသားမှ ရပ်ထားသည့် ယာဉ်အား...
၂ ကြိမ် တိတိ အဓမ္မ ပြုကျင့်ရန် ကြံစဉ်သူ နိုင်ငံခြား...